ओखलढुंगाका युवाहरु व्यवसायिक कृषि पेशामा रमाउँदै - Samriddha Online
समृद्ध अनलाईन ९ मंसिर २०७७, मंगलवार १४:५० मा प्रकाशित ( १ महिना अघि) १३५ पाठक संख्या
ओखलढुंगा, मंसिर ९ गते । पछिल्लो समय ओखलढुंगाका युवाहरु व्यवसायिक कृषि पेशामा रमाउन थालेका छन् । बैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका पुवाा तथा कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएका युवाहरु व्यवसायिक कृषिमा रमाउन थालेका हुन् ।
काठमाडौमा बसेर सामान्य रोजगारी गर्दै आएका ओखलढुंगाको लिखु गाउँपालिका ६ का सन्तोष भट्टराई अहिले ब्यवासयिक कृषि खेतीमा लागेका छन् । लामो समयदेखी शहर बस्दै आएका उनलाई कोरोनाका कारण जारी लकडाउनले घर फर्किन बाध्य बनायो । यसअघि परम्परागत खेती लगाउने समयमा घर आउने र पुनः रोजगारीका लागी शहर जाने उनकोे दैनिकी थियो । तर अहिले उनको दैनिकी मात्रै फेरिएको छैन, गाउँमै उदाहरणीय कृषकको रुपमा समेत परिचित भएका छन् । परम्परागत खेती प्रणलीलाई छोड्दै भट्टराईले विभिन्न प्रजातिका फलफूलका विरुवा लगाउन सुरु गरेका छन् भने वेमौष्मि तरकारी समेत गरेका छन् । उनले करिब २ लाख ३० हजार रुपौयाँ बराबरको लगानीबाट व्यवसाय सुरु गरेको बताउछन् । सहरबाट फर्किएर गाउँमै व्यवसाय सुरु गरेपछि उनलाई परिवारका अन्य सदस्यले समेत साथ र हौसला दिइरहेका कारण आफु खुसी रहेको बताउछन् ।
त्यस्तै जिल्लाको सिद्धिचरण नगरपालिका–९ ज्यामिरेका तेजनारायण श्रेष्ठ बिगत ४ वर्ष देखि अकबरे खुर्सानी संग रमाई रहका छन्। ९ वर्ष अघि धन कमाउने सपना बुनेर कतार पुगेका उनको कुनै प्रगति नभए पछि कतारबाट गाउँ फर्किएर अकबरे खुर्सानीको खेती गरेर रमाई रहेका हुन् । उनी जिल्लमा मल्चिङ प्रविधिबाट खेती भित्राउने पहिलो किान हो । अहिले उनले गरेको खेतीले मनग्गे आम्दानी दिइरहेको छ । परम्परागत तथा निर्वाहमुखी खाद्यवाली त्यागेर सुरुमा उनले आफ्नो पैत्रिक सम्पतीको ११ रोपनी जग्गाबाट अकबरे खेती थालेका भए पनि ४ वर्षको अन्तरमा भाडासहित २७ रोपनीभन्दा बढी क्षेत्रमा अकबरे खुर्सानी र अन्य तरकारी खेती गरिरहेका छन् । ३१ वर्षीय तेजनारायण श्रेष्ठले वार्षिक १५ लाख रूपैयाँ बढीको अकबरे खुर्सानी बेचिरहेको बताउछन् ।
यता सिद्धिचरण नगरपालिका वडा नं. ५ सानीटारका पोेकल दाहाल वर्षौ देखि समाजिक संघ संस्थामा काम गर्दे आउएका भए पनि अहिले कृषिफर्म नै खेलेर कृषि पेशामा लागेका छन् । नेपाल रेडक्रस सोसाईटी ओखलढुंगा शाखाका उपसभापति समेत रहेका दाहाल अहिले प्राय आफेनै फर्ममा भटीन्छन् । समाजिक काममा लागे पनि पेशाव्यवसाय नगरी केही गर्न सकिन्न भनेर आफु कृषि व्यवसायमा लागेको र अहिले सम्म आफु सन्तुष्टि रहेको उनको भनाई छ ।
त्यस्तै लामो समय राजधानीमा बसेर अध्ययन पुुरा गर्नु भएका चम्पादेवी गाउँपालिकाका तेजेन्द्र बिष्टले पनि तरकारी खेतीगँगै कुखुरा पालन ब्यवसायबाट मनग्य आम्दानी लिइरहेका छन् । करिब ७० लाखको लगानीबाट कृषिसँगै कुखुरापालन ब्यवसाय सुरु गरेका उनको ब्यवसाय मज्जाले फस्टाएको छ । । लाहर्मी कृषि फारम दर्ता गरेर व्यवसाय सुरु गरेका उनले आफुमात्रै नभएर दुई परिवारका ७ जना समस्यलाई समेत रोजगार दिएका छन् । जिल्लाका अन्य क्षेत्रमा समेत कोरोना कहरपछि रोजगारी गुमाएका युवाहरु गाउँ फर्किएर व्यवासायिक कृषि पेशामा आवद्ध भएका छन् ।
त्यस्तै गरी चम्पादेवी गाउँपालिक वडा नं. ९ का वडा अध्यष उज्जन बुढाथोकी व्यवसायिक बाख्रा पालनमा लागेका छन् । उनी युवाहरुलाई स्वरोजगार बनाउनका लागि र गरे देश मै सुन फल्छ भन्ने उदाहण दिनका लागि यो व्यवसाय सुरु गरेको बताउँछन् । राजनिती गरेर समाजिक काममा लाग्ने समाजिक मान्छेहरुले पेशाव्यवसाय सुरु गरे भ्रष्टचारमा कमी आउने उनको भनाई छ ।
यता लिखु गाउँपालिका वडा नं. ८ का रेशम बिष्टले ०५०–०५१ देखी काठमाण्डौमा फोटो स्टुडीयो गरेर बसे । सबै शहर पलायन हुन थाले पछि गाउँ विराने बनेका कारण आफु गाउँ फर्केको उनले बताए । बिष्टले अहिले धानखेती गर्दै आएको र केही बाँझो जग्गाको सदुपयोग गरी लिखु फाँटमा रहेको साठीबेसी खेतमा केराखेती गरेका छन् । उनले २७ रोपनी बढी जग्गामा केरा खेतीको साथमा बोयर बाख्रा समेत पाल्न सुरु गरेको बताए । युवा बिदेश र शहर पलायनका कारण खेतीयोग्य जमिन बाँझो हुन थालेपछि आफुलेकेही गर्नु पर्छ भनेर खेत बाँझो राख्नुभन्दा केराखेती गरेको उनको भनाई छ ।
गाउँ फर्किएर व्यवसाय गर्न थालेका युवाहरुको तथ्याँक जिल्लाका कुनै स्थानीय तहले राखेको भने पाईन्न । गाउँपालिकामा तथ्याङ्क नभएपनि त्यस्ता युवाहरुको खोजी गरेर प्रोत्साहनका कार्यक्रम ल्याउने स्थानिय सरकारको तयारी भई रहको खिजीदेम्वा गाउँपालिका अध्यक्ष बेदबहादुर रोकाले बताए ।
जिल्लामा फलफूल तथा तरकाछ । युवा विदेश जानु पर्दैन समृद्धि हामी आफैँले ल्याउने हो भन्दै युवाहरु ब्यवसायीक खेतीमा लागेको ब्यवसायिक खेतीकमा लागेका युवाहरुको भनाई छ ।
कोरोना कहरका कारण रोजगारी गुमाएका ओखलढुंगाका युवाहरु व्यवसायिक कृषि तथा पशुपालन ब्यवसायमा अबद्ध भए पछि यति बेला गाउँहरु मनमोहक बन्दै गएका छन् । लामो समयदेखी सहरी क्षेत्रमा बसोबास गरी रोजगारी गर्दै आएका युवाहरु कोरोना महामारीका कारण रोजगारी गुमेपछी गाउँ फर्किएर व्यवसाय सुरु गरेको र गाउँ फर्किपछिको समयलाई सदुपयोग गर्दै युवाहरुले गाउँमा भएका बाँझो जमिनलाई खनजोत गरी तरकारी तथा फलफुल खेती गरे पछि गाउँघरमा भौतारीएर हिड्ने हरुले पनि त्यहि सिको गरि रहेका छन् ।